Halgamaagu Xurmo iyo Qadarin Ayuu Ummadiisa ku Lee Yahay – Rasaasa News
Halganka Somalida Ogadeeniya ay ugu jirto aayo ka tashigeeda waxaa saldhig u ah halgamaaga qoriga sita iyo Aqoon yahanka ku haga siyaasad haboon oo ay ku dheehan tahay wadninimo iyo daacadnimo.
Halgamaagu waa shakhsi ka soo dhex baxa bulshada, halgamaagu wuxuu meel iska dhigaa tabcasho gaar iyo danta qoyskiis, wuxuuna ka doortaa qabashada danta guud, wuxuu u huraa dalkiisa iyo dadkiisa in ay xabad ugu dhacdo jidhkiisa kaliya difaaca dalkiisa iyo dadkiisa.
Go,aanka uu N/huru qaato ee ah in uu dalka iyo dadka u dhinto waa arin sahlan ma aha waa arin geesinimo leh oo ayna dadku wada samayn karin. Hadaba, shakhsiyaadka go,aankaas qaata waxaa uu bulshada ka mudan yahay arimahan;
In lagu qiimeeyo meel kasta oo uu joogo wax qabadkiisa
In ay bulshadu u hurto wax alaale wixii dhaqaale ah ee uu mudan yahay
Ixtiraam joogto ah, hadii uu qori wato iyo hadii uusan wadaninba.
Halgamaagu waa ilaaliyaha sharfta ummada
Halgame haduuna jirin sharaf
Waxaa bogga rasaas.com uu aad uga xun yahay, dhibaatooyinka aan ka soo waaqsiga lahayn ee uu Jwxo-shiil u gaystay N/hurayaalka Qaaliga ah, oo ah lafdhabtarta halganka.Waraysi
Waxaa na soo gaadhay cajalad cod ah oo ay noo soo gudbiyeen N/hurayaal qaali ah, oo ka sheekaynaya dhibaatooyinka ku dhacay halganka ee uu gaystay Jwxo-shiil. Waxaanu idiin soo dayndoonaa waraysiyada N/hurayaalka oo ay tiradoodu kor u dhaafayso 12 xubnood oo kuligood ah masuuliyiinta ciidamada Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya Jwxo.
Halkan Dhagayso Hordhaca